Saafi Films - News: Ciidamada Dowlada iyo kuwa Itoobiya oo isku jeestay �Faah Faahinta dagaal dhacay�
Ciidamada Dowlada iyo kuwa Itoobiya oo isku jeestay �Faah Faahinta dagaal dhacay�
wararkii ugu danbeeyay ee haatan naga soogaaraya Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu dagaal xoogan ku dhex maray ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Dowlada Itoobiya.
qaar kamid ha dadka degaan oo aan la hadalnay ayaa waxa ay sheegayaan in uu jiro qasaaro xoogan oo sookala gaaray laba dhinac iyo waliba dadka rayidkaa.
Dagaalkaan ayaa waxaa lagu soowaramnaa in uu ka danbeeyay kadib markii sida la sheegay Xaafado kamid ah Magaalada Baladweyne oo ay Ciidamada Itoobiya ay bandow kusoo rogeen ay qaab lugees ahaan ku mareen Ciidamadaan Dowlada Soomaaliya sidaasna uu ku dhexmaray dagaalkaan.
ilaa iyo haatan macadaqasaaraha rasmigaa ee ka soogaaray Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya inkastoo ay sheegayaan wararka qaar in uu halkaasi uu ku dhintay askari katirsan Ciidamada Dowlada Soomaaliya halka dhanka Ciidamada Itoobiyana uu hal askari kageeriyooday dhaawacana uu intaa kabadan yahay.
sidoo kale dadkaan aynu lahadalnay ayaa waxa ay sheegayaan in uu ahaa mid xoogan sidoo kale lam oga qasaaraha rasmigaa ee soogaaray dadka shacabkaa.
Ilaa hada majirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka Maamulka Dowladda ee Gobalka Hiiraan oo ku aadan dagaalkaasi la sheegay inuu dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya.
waa markii ugu horeysaay uu halkaasi dagaal ku dhex maro ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo ay ka dhashaan qasaaro xoogan.
4,551,882 unique visits